Raw Tianeptine sodium mhuru yehuni (30123-17-2) Vaiti - Phcoker
Raw Tianeptine sodium munyu pfupa (30123-17-2)
Rated 5.00 Kunze kwe5 yakavakirwa 1 kasitoma Rating
Tianeptine sodium salt powder is a tricyclic compound, is a faciltive facilitator of 5-HT (serotonin; sc-201146) in vitro ....
Unyanzvi: 1290kg / mwedzi
SKU: 30123-17-2 Category: Kuonda
Raw Tianeptine sodium munyu pfupa (30123-17-2) video
Raw Tianeptine sodium munyu pfumbi (30123-17-2) Tsanangudzo
Product Name Raw Tianeptine sodium munyu pfupa
Kemikari Name Tianeptine sodium; Tianeptine sodium salt; 30123-17-2; Stablon; Coaxil;
muchiso Name N / A
Kirasi yeMishonga N / A
CAS Number 30123-17-2
Molecular Formula C21H24ClN2NaO4S
Molecular Wsere 458.93
Monoisotopic Mass 458.104 g / mol
Kunyorera Point 1800C
Birara Point 609.2 ° C pa 760 mmHg
ruvara Muchena kusvika pachena-poda yakachena
Skukodzera DMSO: ≥20mg / mL
Storage Temperature Desiccate at RT
APane Tianeptine sodium salt powder is salt of Tianeptine.
Tianeptine is antidipressant.
Tianeptine sodium munyu isuyu yeTianeptine. Tianeptine, tricyclic compound, inosarudza musarudzo we 5-HT (serotonin; sc-201146) inowanikwa mu vitro uye mu vivo. Uyezve, Tianeptine inonzi inoshanda sechisarudzo inhibitor ye dopamine inowedzera uye yakafanana neamineptine. Tianeptine haina mhedzisiro yakajeka pane monoamine uptake. Mune chidzidzo chinoshandisa synaptosomes yakachena kubva muuropi hwehu, Tianeptine yakashumirwa kuti iwedzere serotonin inotora muuropi dzakasarudzwa. Synaptosomes yakanatswa yakawanikwa pamakonzo uye yakabatanidzwa ne tritium-yakanyorwa 5-HT uye Tianeptine mu vitro. Iko synaptosomes yakazoongororwa kuti iwane nekusunungurwa kwe5-HT kuburikidza nekambani yemvura inopenya.
Raw Tianeptine sodium mhuru yehupfu inonzi anypical antidipressant nezviito zvakasiyana-siyana, zvikurukuru pane glutamatergic system.Itttenate glutamate release and modulates the function of the AMPA receptor.Tianeptine inoshandawo segonist ye μ-opioid receptor (EC50s = 194 uye 641 nM yevanhu uye mapepa ekugamuchira, maererano). Icho chinoshanda se fluoxetine mukutarisira kwemashure-kunetseka mupfungwa dambudziko.
Tianeptine sodium salt ine manotropic maitiro pamusoro pevanhu vane kukanganisa kunoshungurudzwa nehutano hwepfungwa uye vane mano ekuvandudza kutsvaga uye kugadziriswa kune vanhu vasina hanyararire.
Tianeptine sodium salt powder (30123-17-2) Mechanism of Action
Zvidzidzo zvenguva pfupi zvinoratidza kuti tianeptine inoshanda segonist yakazara pa-mu-type opioid receptor (MOR). Tianeptine yakatsanangurira monoaminergic hypothesis yekuora mwoyo, pamwe chete nemichina yakawanda inotsigirwa monoaminergic iyo izvo zvinoitwa nevanonyanya kuzivikanwa nevanorwisana nevekare zvinotsanangurwa. Kunyanya, chirwere ichi chinofungidzirwa kuti chinoramba chichishandura glutamate receptor kuputika kwechi hippocampal CA3 kushambadzira kushamwaridzana sangano. Tsvakurudzo yezvino inoratidza kuti tianeptine inounza zvinetso zvayo zvinodzvinyirira kuburikidza nekugadzirisa kwebasa re glutamate (semuenzaniso, AMPA receptors nevanogamuchira NMDA) uye zvinokonzera kusunungurwa kweuropi-yakagadzirirwa neurotrophic factor (BDNF), iyo inobata purasitiki yemazinga. Zvimwe zvidzidzo zvenguva pfupi zvakatsigira basa rehuaneptine mukugadzirisa kwebasa re glutaminergic muamygdala, nzvimbo yepfungwa yeuropi inobatanidzwa nezviyeuchidzo.
Tianeptine inoderedza iyo hypothalamic-pituitary-adrenal response kudzvinyirira, uye zvino inodzivirira nyaya dzine chokuita nekuita mupfungwa. Mumakondohwe, kushungurudzika kwemaitiro akaoma kunowedzera extracellular mazinga e glutamate mu-amygdala inoshandiswa iyo yakagadziriswa ne tianeptine. Zvinotoshamisa kuti SSRI fluoxetine yakawedzera extracellular glutamate mazinga mumatolateral amygdala pasinei nematambudziko. Iyi nhamba inoratidza kuti maitiro ekuita kwetianeptine akasiyana neSRRIs uye anotsigira pfungwa yokuti nzira yekuita ye tianeptine inobatanidza nekuchinjwa kwebasa re glutaminergic muamygdala uye hippocampus.
Mukuwedzera kune nzira dzakataurwa pamusoro apa, tianeptine inoratidzika kusagadzikana uye kushandiswa kwemishonga inokonzera kushandiswa kwe serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT), uye 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) muhunhu hwehupi.
Kunyange zvazvo monoaminergic neurotransmitters serotonin (5-HT), noradrenaline (NA) uye dopamine (DA) inopupurirwa kuti yakabatana nekuitika kwekuora mwoyo kwepfungwa, iko zvino yave ichiziva kuti kukanganiswa kwemonoamine hakukwanisi kutsanangura nzira yekuita kweanorwara mishonga.
Benefits of Tianeptine sodium salt powder (30123-17-2)
Tianeptine sodium munyu inogona kubata chirwere chikuru chekuora mwoyo.
Tianeptine sodium salt ine anti-anxiety uye antidipressant uye uye nootropic.
Tianeptine sodium salt inowedzera mafungiro uye inovandudza hutano hwepfungwa.
Tianeptine sodium salt inogona kuvhiringidza panic kushorwa kubva kuitika.
Tianeptine sodium salt inobata marwadzo anokonzerwa ne fibromyalgia.
Tianeptine sodium munyu unoshandiswa mukurapa kushungurudzika mune varume vane kusagadzikana.
Tianeptine sodium munyu ine unyoro hwakanaka hweAdHD.
Tianeptine sodium munyu inokurudzira neuroplasticity.
varumbidzwa Tianeptine sodium salt powder (30123-17-2) Dosage
Tianeptine Sodium ine hafu yehupenyu hupfupi panguva inenge ye2.5 hours14, uye inoda kubviswa kwemaviri zuva rose. Iyo tianeptine sodium dosage ndeye 12.5 mg inotorwa katatu zuva rimwe nerimwe, nehuwandu hwe37.5mg pazuva.
Usapfuudza 50mg ye Tianeptine Sodium mune rimwe zuva. Kuita izvi kunogona kuzarura mukova wekuwedzera kushandiswa nekudhakwa kunogona.
Zvikanganiso ye Tianeptine sodium munyu pfupa (30123-17-2)
Tianeptine sodium munyu pfupa inopindirana nezvikamu zvakawanda zveuropi kusanganisira maopiod receptors, izvo zvinogona kuita kuti rutivi rwemhepo ruve nemafungiro euphoria. Dzimwe mimwe migumisiro ine maitiro akasiyana-siyana anosanganisira zvinotevera:
▲ Musoro wepamusoro (kusvika ku 18%)
▲ Utsivi (kusvika ku 10%)
▲ Kunyunyuta / usiku kunotyisa (kusvika ku 20%)
▲ Kugona (kusvika ku10%)
▲ Dry muromo (kusvika ku 20%)
Dzimwe mimwe migumisiro inosanganisira zvinhu zvakadai sokuzvimirira, kuora mwoyo, kuzvidya mwoyo kana Chiropa Toxicity. Zvimwe zvinonetsa zvakanyanya zvinosanganisira kurega kubviswa shure kwechisimba uye inofungidzirwa 0.1 - 0.3% yevashandi vachave nechinetso ichi. Izvo zvakamboitika, sezvaunogona kuona, migumisiro yemigumisiro yeTianeptine sodium munyu inotenderera kune mumwe munhu uye pachake wega biochemistry.
Zvakakosha kuziva kuti:
Vakura vakwegura vanofanira kutora muto maduku weTianeptine sodium munyu, sezvinofanirwa nevarwere vane kukundikana kwetsvina. Nhamba haifaniri kugadziriswa nevarwere vane doro kana kushaya simba, kana varwere vane dialysis .Zvino kuora mwoyo, kufanana neane tianeptine, kwakawedzera ngozi yehupukisi hwechiropa.
KUGADZIRIRA UYE KUDZIDZA:
Ichi Chinyorwa Kutengeswa Kwekutsvagisa Chete Chete. Mitemo Yekutengesa Nyorera. Kwete Yekushandiswa Kwevanhu, kana Kurapa, Veterinary, kana Kushandisa Kweimba.
Raw Lorcaserin powder ndeyekirasi remishonga inonzi serotonin receptor agonists.Ichishanda nekuwedzera manzwiro ekuzara kuitira kuti .......
Unyanzvi: 1480kg / mwedzi
Amino-5-methylhexane powder is an aliphatic amine inoshandiswa pakugadzirwa kwe pyridines uye mamwe magetsi ...
Unyanzvi: 1210kg / mwedzi
Synephrine HCL powder inowanzoitika alkaloid chemicals inowanikwa mbeu uye yakabudiswa kuti ishandiswe sekuwedzera ...
Unyanzvi: 1450kg / mwedzi
Raw L-Carnitine powder (541-15-1)
L-Carnitine powder ndeyezvisikwa, mavitamini-semuviri uye zvokudya zvinowedzera, zvinotora basa rinokosha pakugadzira simba nekuendesa ......
Unyanzvi: 1358kg / mwedzi